के तालिबाान राष्ट्रसंघमा बोल्न पाउला ? – Maitri News
के तालिबाान राष्ट्रसंघमा बोल्न पाउला ?
maitrinews September 23, 2021
न्युयोर्क । तालिबानले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधनको व्यवस्था मिलाउन महासचिव एन्टोनियो गुटेरसलाई पत्र पठाएको छ । महासचिव गुटेरसलाई पत्र पठाएर विश्वका प्रमुख नेताहरूका सामु आफ्ना कुरा राख्ने अवसर मिलाइदिन तालिबानले आग्रह गरेको हो । त्यस्तै तालिबानले संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अफगानिस्तानको राजदूतमा सुहेल साहिनलाई मनोनीत गरेको पनि जनाएको छ ।
सुहेल खान दोहामा बसेर तालिबानको प्रवक्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । तालिबान सरकारका विदेशमन्त्री अमिर खान मुत्ताकीले महासचिव गुटेरसलाई पत्र लेखेर महासभामा सम्बोधन गर्न चाहेको बताएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।
रोयटर्सका अनुसार गुटेरसका प्रवक्ता फरहान हकले मुत्ताकीले पत्र पठाएको पुष्टि गरेका छन् । अहिले गुलाम इसाक्जई संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अफगानिस्तानका राजदूतका रूपमा रहेका छन् । तालिबानको पत्रमा भनिएको छ, ‘इसाक्जईको मिसन पूरा भएको छ । अब उनले अफगानिस्तानको प्रतिनिधित्व गर्ने छैनन् । ’
Previous Previous post: अमेरिकाले अरू मुलुकलाई थप ५० करोड मात्रा कोरोना खोप दिने
Next Next post: वायु प्रदूषणबाट ७० लाख मानिसको अल्पायुमै मृत्यु
कहिल्यै भमरा नबस्ने फूल
maitrinews November 7, 2021